Akụkọ - Igwe na-egweri ala na-ezo aka na-egweri ihe / nkume / terrazzo / epoxy n'ala
Diamond Cup Gringding Wheels
Diamond Gringing efere
Htc egweri efere
PCD egweri Discs
Ngwaọrụ Pụrụ Iche
Diamond Hụrụ Agụba
Sintered Diamond rawụta ibe n'ibe
Ihe omumu nke ala
Polishing Kedo akwa
Ala na-egweri ala na-ezo aka na-egweri ọgwụgwọ nke ihe / nkume / terrazzo / epoxy ala
Mpekere ala na-ezo aka na-egweri ọgwụgwọ nke ihe / nkume / terrazzo / epoxy n'ala, nke na-eme ka terrazzo dị ọcha, elu elu, epoxy mortar layer na ochie epoxy ground, wdg Naanị ugbu a, m ji ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-eme ka ndị na-egweri HTC Diamond Ala n'ihi na nke mbụ nzọụkwụ ike ike-egweri, na usoro nke nnukwu urughuru size atọ Rhombus agba egweri akpụkpọ ụkwụ ezi egweri, polishing na usoro ndị ọzọ.
Mee ka ala dị ọcha karịa, na-enwu gbaa, ma dịkwa nro, si otú a na-eme ka ịmara mma nke ala dịkwuo mma. A na-ejikarị eji igwe eji egweri ala bụ igwe 490, igwe na-egbuchasị ihe na ngwa ndị ọzọ metụtara ya.
Olee otú izugbe usoro nke egweri ala N'ịga wholesaler ọrụ?
1. N'elu ọgwụgwọ: Jiri a ntụ-free diamond grinder wepụ ájá na-ese n'elu mmiri n'elu ciment na-etolite a ike ike n'elu ala. Jiri igwe nhicha wepu ájá, irighiri ihe na uzuzu. Kpoo mmiri mmiri na gas ma ọ bụ draya.
2. Primer: Tinye onye isi na ihe siri ike nke ihe dị na ya, jikọta ya na igwekota, ma tinyekwa ihe ahụ na ahịhịa, ahịhịa ala ma ọ bụ egbe ịgba mgbe eji ya emebe agba, yana agba na-ebu oge iche karịa Oge 8.
3. Igwe mkpuchi: Were usoro nke isi ihe na hardener, kpalie ya na igwekota, tinyezie quartz nchịkọta, kpalie nke ọma, jiri trowel mee ka ngwakọta ahụ dị n'elu n'elu primer ahụ n'ime oge eji eme ihe. , Nke mere na oghere na pinholes jupụtara.
4. Uwe elu: Mgbe resin nke mkpuchi dị n'etiti na-eme ka obi sie ike, ọ bụrụ na enwere ihe dị n'elu, ọ ga-ebu ụzọ gbadaa, oghere ndị ahụ ga-ejupụta, wee were ọnụ ọgụgụ quantitative nke onye isi na hardener iji kpalie ma gwakọta ya n'ụzọ zuru ezu, ma jikwa uwe elu dị larịị. N'otu oge ahụ, tupu ịmịkọta simenti, a na-eji ihe eji agịga eme ihe iji tụgharịa na-aga n'ihu na resin mortar, nke mere na mkpokọta nchịkọta nwere ike kesaa ma wepụkwa ikuku, ka mmiri resin ahụ dị mma ma na-enwu gbaa.
Usoro nchapu okwute: Ichapu okwute bu ihe di nkpa maka ichebe okwute. Okwute ụfọdụ nwere ike ịkpụcha ozugbo.
Ebumnuche bụ isi polishing bụ ime ka nchapụta nke okwute dị elu. A na-eme ka imi nkume na -emegharị dịka usoro nke egweri siri ike → nrịcha mma → ezigbo egweri → egweri → polishing, na ụfọdụ n'ime ihe siri ike na-egweri nzọụkwụ nwere ike ịhapụ, ọ dabere na ma elu nke nkume mbụ ahụ agbanweela mbido ọgwụgwọ.
Ing Na-egweri ihe: A chọrọ iji diski na-egweri were ezigbo mma, arụmọrụ na-egweri dị elu, usoro ịkụcha ihe na-adịghị mma, ala ahụ adịghịkwa njọ. Ọ tumadi ewepu hụrụ nkwọcha akara ekpe site na nkume na aga na usoro na ire ụtọ nke nkume, The ịme ngosi uwe elu ala bụ ebe;
IngSegharị-ọma: wepụ ihe nhụcha ọka na-adịghị mma iji mepụta akara ọhụrụ kachasị mma, nke mere na elu okwute ahụ dị mma ma dịkwa mma;
Free egweri: patternkpụrụ, ahụ na agba nke okwute ahụ mgbe egweri egweri egosiri n'ụzọ doro anya, elu ahụ dị mma ma dịkwa mma, ma enwere ọkụ na-adịghị ike;
④ Ezigbo egweri: Elu okwute mgbe egweri ya egweri, na-enweghị ihe ọhụụ nke anya gba ọtọ. Elu ahụ na-adịwanye mma, na gloss nwere ike iru ihe ruru ogo 55 ma ọ bụ karịa;
Polishing: Jiri igwe na-agbazi okwute puru iche iji ghaa okwute site na nke anwughi ma o bu okwute site na Nke 50 rue Nke 3000 iji mee ka ala cha cha ma dikwa nma. Igwe a na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke dị ka enyo, ya na-enwu gbaa nwere ike iru ihe karịrị ogo 85. Dị ka ụdị okwute dị iche iche si dị, a na-eji usoro polishing dị iche iche.
1. The polishing usoro nke ewepụghị panel: ịlele ọnọdụ nke ihe-gluu idozi-ego tupu ịmalite-elu efere-trimming-amalite onye ọ bụla egweri isi na n'aka-na-edebe ndị polishing ọnọdụ-ịgbanwe polishing kwa-ihicha-ịme waksị, nhicha -Nyocha-ala mbadamba-nkwakọ ngwaahịa.
2. egweri na polishing usoro nke aak panel: ịlele ihe onwunwe ọnọdụ-mama mmezi-ntuziaka ike ike egweri-nnyocha-elu osisi-ego tupu ịmalite-ike-egweri-egweri-egweri egweri ọnọdụ-ezi egweri-polishing-ego polishing ọnọdụ-ala osisi.
3. egweri na polishing usoro nke pụrụ iche ekara ahịrị: lelee ọnọdụ nke ihe-elele ma udi nke udi bụ ruru eru-Olee ngwe ahịrị dị ka ọkọlọtọ template-ike ike-egweri ma nsọtụ-ike-egweri si na nsọtụ abụọ ruo n'etiti-mma-egweri-splicing-mmiri na nkume igwe nri mma 400 # Mgbe disassembling-egweri na polishing-nnyocha.
Post oge: Mar-08-2021
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, anyị nwere ike ịga Alibaba anyị
Adreesị:No.1719, Changjiang Road, Lianxi District, Jiujiang City, Jiangxi Province.